Ireo variants amin'ny Samsung Galaxy S10 sy Huawei P30 dia ho tonga miaraka amin'ny RAM 12 GB | Androidsis
Samsung Galaxy S10 sy Huawei P30 dia ho tonga miaraka amina RAM 12GB
Nisy fivoahana vaovao, nivoaka avy tao amin'ny Weibo, nanambara izany Samsung Galaxy S10 sy Huawei P30 finday hanomboka amin'ny volana martsa 2019. Ny fivoahana dia manambara ihany koa fa ny maodely Galaxy S10 X 5G sy Huawei P30 Pro dia mety hampiasa RAM 12GB.
Ny orinasan-tsarimihetsika finday dia nanomboka namoaka finday tamin'ny RAM 10GB. Ny telefaona lalao Xiaomi Black Shark Helo Io no terminal voalohany misy RAM 10 GB, arahin'ilay nambara vao haingana Xiaomi Mi Mix 3.
Ity sary manaraka ity dia manambara izany Ny Galaxy S10 dia ho tonga amin'ny volana martsa amin'ny karazany efatraToy ny Galaxy S10 misy RAM 4GB, Galaxy S10 Plus misy RAM 6GB, Galaxy S10 X misy RAM 8GB, ary Galaxy S10 X 5G miaraka amin'ny RAM 12GB, fahaiza-manao mahavariana. Mahaliana fa tsy misy kinova RAM 10 GB an'ny Galaxy S10, saingy ity dia zavatra iray izay tsy maintsy hamafisina any aoriana.
Ny famoahana koa dia manambara izany Huawei dia hanao fanamby amin'ny andiany Galaxy S10 miaraka amin'ireo finday avo lenta P30. Ny Huawei P30 dia antenaina hanana RAM 8GB, raha ny P30 Pro mandroso kosa manana 12GB RAM.
Araka ny lazain'ny anarany dia ny Samsung Galaxy S10 X 5G miaraka amin'ny RAM 12 GB dia hamatsiana fanohanana ny fifandraisana 5G. Tsy misy resaka fanohanana tambajotra 5G ao amin'ny P30 Pro amin'ny famoahana etsy ambony. Mbola mikendry ny handefa ny telefaona 5G voalohany azy ihany koa i Huawei amin'ny fiandohan'ny taona 2019. Noho izany dia misy ny vintana fa ny P30 Pro dia ho lasa telefaona voalohany an'i Huawei hanohana ny fifandraisana 5G haingam-pandeha. Xiaomi, taorian'ny nanombohan'ny Mi Mix 3, dia nanamafy ihany koa fa hisy ny kinova 5G azy amin'ny telovolana voalohany amin'ny taona 2019, noho izany dia efa mahaliana ny fifaninanana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Samsung Galaxy S10 sy Huawei P30 dia ho tonga miaraka amina RAM 12GB
Haharitra hafiriana ny Xiaomi hahatrarana finday 100 tapitrisa amidy?
Ny Meizu M8 Note dia ofisialy amin'ny Snapdragon 632 sy maro hafa